Anarana Breziliana - mpianatra feedback
Anarana Breziliana — mpianatra feedback
Aho Lana Kislitsina, ary izaho ‘ny sofiny’ ny fitiavana ny mahagaga Brezila, dia nandao ny foko tamin’ny fetibe Rio de Janeiro, ary tsy ela fotsiny aho voatery handeha ho azy. Tiako ny portioge, dia velona tao an-tanànan’i Rostov-on-don, — piasana ara-pahasalamana laboratoara teknisianina ao amin’ny sampana fameloman’aina. Mianatra amin’ny Oniversite, ary izany angamba ny hany kofehy izay aho dia nisintona indray) any Brezila amin’ny Talaky masoandro Rio. Ny milaza fa tsy amin’ny faran’ny ny fialan-tsasatra, nandao ity tanàna mahafinaritra dia ny hoe na inona na inona. Vao maraina dia tonga tao amin’ny seranam-piaramanidina, dia ny orana, ny fanahiko, ny fisaonana, mampalahelo. Difotry ny alahelo ny foko ny eritreritra ny ela nisokatra noho ny fitiavako-Rio. Tsy tadidiko, ahoana no check-in, fa mipetraka eo amin’ny voromby sy midera ny hatsaran-tarehy ny Rio, nahatsapa ho toy ny olona iray horonana ny tenda(ihany koa ny avy any Rio fanohanana, tsy tokony hiandry-izy dia efa mitomany, rehefa nahita ahy tao amin’ny lava-dalana ny orana). Ara-tsaina nangina ny tenako aho hoe: ‘ianao no tsy mitomany, ianao tsy saro-tahotra anefa na zavatra.
Andro ianao, dia jereo indray ny sarobidy Rio. ‘Ary mba hampitombo ny moraly, dia nanapa-kevitra ny hihaino ny hira ao amin’ny toe-javatra saina ny zazalahy dia mpilalao foana aho voavonjy ho amin’ny tsara. Fa tamin’ity indray mitoraka ity, aho tamin-kerisetra nanangana, rehefa manindry ny bokotra, nilalao ny hira, ny andalana voalohany amin’ilay hira hoe:»aza mitomany, ry malala, ny fitiavana no tsy ho tapitra.»Dia vaky ho sobs. Afaka tony nandritra ny adiny iray, ny maha-ambony ny lanitra sy lavitry ny tantara ao Brezila. Ireo no fihetseham-po engendered ahy i Brezila, firenena iray izay feno maha-te ho tia, tsara toetra, tsara tarehy ny olona amin’ny saina tsy miangatra. Brezila dia a mahafinaritra izao tontolo izao, izao tontolo izao ny Masoandro, hazavana, hafanana, ny loko mamirapiratra, dia tsy hay lazaina hatsaran-tarehy.
Ho ahy, Brezila dia ny fo izao tontolo izao
Ny olom-pantatra amin’ny fiteny portiogey aho afa-tsy ny taona lasa izay, fony aho, mba hitady ny vaovao mozika, tafintohina amin ny hiraavy eo dia, ahoana no manahirana ho ahy ny hanaiky, tsy fantatro akory hoe inona moa ny teny ity hira ity dia nihira, nefa aho ka namely ny fitiavana, hatsaram-panahy sy ny fahagagana feon’ny io fiteny io, dia nihazakazaka hitady ny tononkira, mba handika sy mianatra (amin’ny fandikan-teny nanampy ahy lehibe sy tsara mpandika teny) eo Amin’ny hira iray tsy afaka ny hanakana izany, tsianjery izany, izaho efa raiki-pitia amin’ny portogey (Brezila) teny. Avy eo aho dia lasa nahalala ny asa Alba ny Romulus (Breziliana ilay mpihira), nianatra sy nafindra tany am-polony ny hirany. Avy eo, nanomboka ny fikarohana ho an’ny sarimihetsika amin’ny teny portiogey, ho ahy dia ny fahitana fa Breziliana tantara mitohy amin’ny fahitalavitra, izay tamin’ny andro fahiny dia nandefa fandaharana amin’ny fahitalavitra Breziliana dia aza ary na inona na inona, ary na dia afaka ny ho mahafinaritra ny mijery. Teo aloha, tsy manao izany tsy mijery TELE, amin’izao fotoana izao tsy mitady, fa lasa mafana fo mpankafy ny tantara mitohy Breziliana sy ny tombontsoan’ny, amin’izao fotoana izao dia afaka mankafy ireo serials ny tany am-boalohany, raha tsy misy miteny portiogey fandikan-teny. Ny haavon’ny fahalalana ny zavatra afaka manao izany. Fa mba hahazoana io sehatra tsy maintsy mandresy ny lalana feno tsilo. Feno tsilo dia ho ahy noho ny zava-misy fa ny herintaona lasa izay (febroary) Natalia Popeline tsy mbola namorona ny tsara namany sary, ary efa toy izany tahaka ny azy, ao ny andro taloha, ny fikarohana ny amin’ny alalan’ny Aterineto iray manontolo mba hahita misy ara-nofo amin’ny teny portiogey, ny taranja efa ao fa ny fotoana dia efa (ary mbola tsy), boky tsy ho hita, afa-tsy amin’ny alalan’ny manokana order sy amin’ny unrealistically vidiny avo. Tamin’ny fotoana aho nahita ny tranonkala ny Natalia, ary nanao sonia ho an’ny ny fizarana maimaim-poana ny lesona, dia nahazo tsara ny teny fototra (satria fotsiny aho no nipetraka ny anarana, dia nanao fara-fahakeliny — ora isan’andro, ary avy eo dia manana ny tena nijery ny andian-karazana hafa mihitsy ireo).Ny lesona fa izaho no naniraka Natalia dia tena mampiana-javatra, ary dia narafitra. (ary, na dia tena misy ara-nofo aho, dia efa zatra aho, dia mbola nianatra zavatra maro mahaliana ny zava-misy momba an’i Brezila). Tena tiako ihany koa ny raki-peo ny lesona, izay duplicated ny voasoratra lahatsoratra. Ny zava-dehibe indrindra, ny Natalia ny lesona ny fampiasana ny teny ampiasaina indrindra amin’ny isan’ny mpiteny. Fitiavana Brezila dia toa karazana virosy, ho an’ny olona rehetra izay miaraka amiko ao Rio, ‘marary’ i Brezila, ka tena te hiverina. Efa nanomboka ny mianatra ny zavatra, ary izy rehetra mazava ho azy nanoro hevitra aho mba hisoratra anarana ao amin’ny kilasy mba Natalia. Tena feno fankasitrahana aho noho ny Natalia noho ny zava-misy fa ankoatry ny fahalalana izy feno ahy ny hery tsara, tsy mampino ny hery sy finoana ao ny mety ‘tsy azo atao’ ao ny nofy.
Misaotra Anao, Natalia
Mirary soa sy faharetana rehetra izay dia mba ho afa-tsy ao amin’ny fiandohan’ny lalana, dia ilay lalana izay hitondra antsika amin’ny olom-pantatra akaiky kokoa amin’ny Brezila, ary tsy azo ihodivirana ny fitiavana izany
← Traikefa efa-polo amby enin-taona ao Portiogaly. Mahafinaritra ho an'ny sokajin-taona rehetra. Tsy misy fameperana. Tena sary
Ny tora-pasika ao Brezila Niaraka tamin'ny x eo anoloan'ny rehetra →